BEERTA DIYAARKA AH EE GEEDAHA YAANYADA IYO BASBAASKA: "AGRICOLA", "SARIIRTA MIRACLE", "TERRA VITA", "BABY" IYO KUWO KALE OO BADAN, IYO SIDOO KALE TALO BIXIN KU SAABSAN MIDKA LA DOORTO? - BEER CAGAARAN
Maxay noqon kartaa mid aad u xiiso leh marka loo barbardhigo geedo u gaar ah beerta beerta leh? Tani waa dhacdo aad u xiiso badan oo bannaanka u ah, sidoo kale, waxaa loo tixgeliyaa waxqabadka faa'iido leh. Ka dib oo dhan, si ay u helaan natiijo wanaagsan, waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo xulashada saxda ah ee kala duwan, iyo sidoo kale sameynta muddada seeding ah ee beerashada. Laakiin waxa go'aaminaya koritaanka, horumarinta geedo, wanaaggiisa - tani, dabcan, dhulka. Carrabka ugu haboon ee geedo waa midda bixisa dhaqan gaar ah baahidooda.
Faa'iidooyinka iyo qasaaraha ciidda diyaar u ah geedo
Inta badan dadka bilawga ah ee beerta hore waxay xitaa ogaanayaan farqiga u dhaxeeya dhulkuna si fiican u qaato geedo, sababtoo ah marka ugu horeysa ee kala duwanaanshuhu ma kala duwanaan. Laakiin ma aha.
Dhulku wuxuu leeyahay tiro ku filan oo sifooyin ah oo saameyn ku leh dhalidda. Waa inay ahaato mid bacrin ah oo ay ku jiraan maaddooyinka looga baahan yahay nafaqada iyo koritaanka.
Maxay tahay microflora ee ciidda, muxuu walxaha u baahan yahay nafaqada? Ka jawaab su'aashan sidan oo kale:
Qodobka walxaha dabiiciga ah iyo walxaha kiimikada ee ciidda waa in lagu dheellitiraa lana helaa lakabka;
awood u lahaanshaha qoyaanka muddo dheer;
ha ku jiraan sunta, lakabyada maadooyinka culus iyo qashinka wax soosaarka halista ah, taas oo ah, inay noqoto jawi bey'adeed;
waxaa ku jira heer dhexdhexaad ah oo ah kiimiko;
ha qabin dibad baxyo ajnabi ah, ha noqdaan kuwo hawo-mareen ah oo cidhiidhi ah, ha ku jiraan muraayadaha - iftiin.
Ka mid noqoshada ajnebiga waa inay ku jiraan:
dhoobadataas oo ka dhigaysa isku dar ah ciidda aad u cufan, daciifin kara biyaha iyo hawada, taas oo sababa geedo si ay u noqdaan kuwo xanuunsan;
harta dhirtataas oo ah natiijada qallafinta, bilaabi in la sii daayo kulaylka oo yareeyo diirada nitrogen ee ciidda, taas oo keenaysa dhimashada caleemaha yar yar;
miraha kabaha, waxay halis u yihiin in ay joogaan jirooyinka ku jira iyaga;
joogitaanka dirxiga ama dirxiga cayayaanka, kaas oo, ku jira dheriga for geedo waxay keeni kartaa waxyeelo weyn u geedka.
Peat waxaa loo isticmaalaa sida qaybta ugu weyn ee ciidda. Faa'iidooyinka ay ka mid yihiin aysidhka sarreysa oo leh caabuqa biyaha saboolka ah. Kuwani "daraasad" ayaa sababa horumarka daciifka ah ee warshadda iyo koritaankooda.
Waxaa halkan ku qoran oo ku saabsan sida si madaxbannaan loogu diyaariyo ciidda loogu talagalay geedo yaanyo, iyo ku saabsan waxa ciidda aad u baahan tahay inaad doortaan geedo iyo dhirta qaangaarka, halkan ka akhri.
Marka la eego isugeyntooda, carrada Terra Vita waxaa loo tixgeliyaa dhul caalami ah, oo ay ku jiraan tiro badan oo ka mid ah qaybaha bayoloji firfircoon, sida:
peat-peat-ga wuxuu kordhiyaa baaxadda hawada iyo hygroscopicity, joogitaanka qaybtan ayaa ka dhigaysa ciidda sahlan;
ciid webiga (maydheen) - ciidku wuxuu noqonayaa mid aad u jajaban;
yaryar iyo macruufiyeyaasha;
acidity ee ciidda waa qiyaasta pH 6-6.5.
Maaddaama ay ka kooban tahay nafaqada nafaqada leh, Terra Vita oo diyaar u ah tamaandhada iyo basbaaska waxay u suuragelineysaa in geedka aaney si dhakhso ah u korin, laakiin sidoo kale wuxuu leeyahay saameyn kicinaysa dhismaha xididka.
Ma aha oo keliya tilmaamahan, laakiin sidoo kale Qiimaha macquulka ah ee carrada (laga bilaabo 90 roon) wuxuu noqonayaa caan ah "Terra Vita".
Nooca noocan ah ee carrada waxaa laga sameeyey peat top peat, taas oo micnaha miisaaman iyo moolka lagu daray lagu qiyaasta loo baahan yahay.
Waxaa loo isticmaalaa khudaarta sii kordhaysa iyo geedo, ubaxyada guriga iyo dalagyada kale. Sababtoo ah sifooyinka agrofiska ee tan carrada ayaa abuuraya shuruudaha lagama maarmaanka u ah biqilka iyo horumarinta seedling.
Qiimaha wax soo saarka ee laga soo bilaabo 86 RUB iyo maqnaanshaha faallooyinka xun, samee ciidda soo jiidata ee bannaanka.
Noocaankan waxaa lagu soo bandhigay qaab ciid ah oo buuxda loogu talagalay geedo sii kordhaya ee tamaandhada, basbaaska, iyo wixii la mid ah, sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa sida labiska sare ee habka fruiting.
Waa in la ogaadaa in ay ka kooban tahay ciidda "Malyshok" waxaa jira tiro buuxda nafaqooyinka lagama maarmaanka u ah geedo sii kordhaya.
Helitaanka qiimaha (laga bilaabo 80 RUB), ayaa u ogolaanaya beerta kasta oo iibsanaya daroogada.
Noocani wuxuu loola jeedaa dadka caanka ah, wax ku oolka ah oo la awoodi karo siyaasadda sicirka ee dhulka. Magaca aan la cayimin ee daroogadaas ka mid ah beeralayda waxay u egtahay "cabitaanka khamriga jecel ee dhirta." Tani waxay muujinaysaa tayada alaabta, u hoggaansanaanta heerarka deegaanka. Waxyaabaha ay ka kooban tahay waxaa ka mid ah qaybo si fiican loo xushay, taas oo ay ugu mahadcelineyso sida ugu wanaagsan ee loo siman yahay hawada ciidda.
Iyo sababta oo ah fiiro sare leh, qalabku wuxuu kaydiyaa lacag loogu talogalay inuu bannaanka u. Qiimaha hooseeya ee badeecada laga soo bilaabo 100 rux iyo maqnaanshaha xaddidaadyada nolosha shelf ayaa ka dhigaysa midkani midka ugu muhiimsan soo jiidashada. Contraindications, iyo sidoo kale sifooyinka xun, daroogada ma laha.
Diyaarinta, casriga ah, peat-humic waxay kor u qaadaa koritaanka iyo horumarinta geedo.
Cuntada nafaqadu waxay saameyn weyn ku leedahay nidaamka asaasiga ah ee geedka, taas oo aan wax u dhimaynin daahfurnaanta deegaanka iyo dhadhanka miraha beeraha.
Inkastoo qiimaha riigsiga ah ee raqiis ah oo ah 86 roon, haddana ma muujin wax khasaare ah, taas oo macnaheedu yahay daroogadu waxay noqon doontaa mid waxtarka leh sida bacarimis.
Waxaa loo tixgeliyaa carrada nafaqada guud, kaas oo loo isticmaalo geeddi-socodka geedo khudradeed. Halabuurka waxaa ku jira peat-tayada oo tayo leh Bacriminta macdanta iyo ciidda la nadiifiyey.
Isticmaalka wuxuu hagaajin doonaa qaab-dhismeedka ciidda, si kor loogu qaado biqilka abuurka iyo koritaanka caafimaad leh. Maqnaanshaha la'aanta iyo qiimaha daroogada laga bilaabo 80 rubuc ayaa waxay xaq u leedahay in ay ka fikirto oo keliya wax soo saar iyo fidinta wareegga ubaxa.
Isku daridda Biudgrunt waxaa loo tixgeliyaa mid guud, si buuxda diyaar u ah inuu isticmaalo.. Tamaandhada, basbaaska, iyo khudaarta kale waxay si gaar ah ugu jawaabaan isticmaalka daroogadaas.
Qaybta isku dhafan ee isku dhafan ee ciidda waxay caawisaa geedi socodka noolaanshaha dhirta, waxay yaraynaysaa waqtiga dillaaca iyo, inkastoo xilliga gaaban ee sii kordhaya, uu gacan ka geysanayaa dhammaystirka koboca xitaa waqooyiga. Qiimaha hooseeya ee daroogada laga bilaabo 66 roon waxay u ogolaanaysaa beerta kasta inay iibsato.
Sababta daroogada waa saliida asiidhka humic oo leh tiro dhamaystiran oo ah maadooyin lagama maarmaan u ah nafaqada dhirta. Isticmaalka daroogada ayaa u oggolaanaysa in ay koraan waxyaabo bey'ada u dhow.
Tani Isku darka wuxuu hagaajiyaa biqilka, wuxuu kuu ogolaanayaa inaad hesho geedo caafimaad leh, xawaaraha geedi socodka ah ee Bisaylkiisa iyo hagaajinayaan tayada dalagga. Daroogada la awoodi karo ee laga soo bilaabo 86 rubuc ayaa loo isticmaali karaa iyadoon wax wax lagu daro ah qaabkeeda saafiga ah.
Noocyada noocan ah waxaa loogu talagalay beerista basbaaska, yaanyada iyo ukunta. Waxaa loo tixgeliyaa bacriminta nitrogen-fosfooraska-potassium-ga oo leh maaddada nafaqooyinka lagama maarmaanka u ah dhirta.
Sidoo kale waa wanaagsan tahay in ciidankan loo isticmaalo geedo caafimaad leh oo adag. Qiimaha hooseeya ee 84 rubber ah iyo la'aanta cilladuhu waxay awood u siinayaan ninkii beerta ka shaqaynayay inuu daryeelo geedahooda.
Loo isticmaalay si ay u koraan geedo of yaanyada, basbaaska, iyo sidoo kale ornamental iyo ubax kala duwan, iyo wixii la mid ah. Waxaa la heli karaa qaab ah xabado peat ah oo leh dhammaan waxyaabaha lagama maarmaanka ah oo ay ku jiraan.kuwaas oo gacan ka geysanaya koritaanka geedo.
Briquette ee cayayaanka noocan oo kale ah ayaa la dhigayaa balaasti kasta waxaana ka buuxsamey biyo illaa buuxda kulaylka. Waxyaabaha soo go'ay waxaa loo isticmaalaa quudinta dhirta furan oo la xiro. Qiimaha badeecadda laga bilaabo 82 rubir ayaa u oggolaanaya beerta beeraha inuu iibsado ciid si uu u helo wax soo saar sare.
Maaddaama ay microflora ciidda ku jira, vermicompost ka caawisaa dhirta ee nuugista nafaqooyinka. Thanks to gargaarka lagu bixiyay geeddi-socodka horumarinta ugxan-yaryar, waxay gacan ka geysataa koboca wax-soo-saarka geedka, wuxuu kordhiyaa dhalidda.
Halabuurka "Biohumus" waxaa ka mid ah peat si fiican u dufan leh balka berrinka ah, peat lagu baaraandegay dhulluubyo dhulka leh shimbir shimbir. Tayo ahaan, nooca bacriminta waxaa loo tixgeliyaa waxtar badan huurka. Qiimaha ka hooseeya 80 rubuc ma saameynayo tayada alaabta.
Ma rabtaa inaad tamaandhada ku samayso goobtaada si ay kuugu farxaan dhalidooda? Ka dibna fiiro gaar ah u yeelo ciidda adigoo akhrinaya maqaaladayada sida loo diyaariyo ciidda beeritaanka yaanyada iyo nooca dhulka loo baahan yahay koritaanka aqalka dhirta lagu koriyo.
Joojinta doorashada ee ciidda gaarka ah ee yaanyada waa in si aad u eegto arrimahan oo kale sida lebbiska dhismaha ciidda. In alaab tayo leh, dhammaan qaybaha waxay leeyihiin jajab isku mid ah oo si fiican isku dhafan. Sida jajabyada, waxaa habboon in la fahmo in jajab yar yar uu keeni doono acidification ee ciidda, halka jajab weyn ayaa horseedi doona uumiga degdeg ah ee qoyaanka. Cabbirka ugu wanaagsan ee qaybaha ee isku dar ah ciidda noqon doonaa jajab ah 3 illaa 4 mm. Wax soo saarka gudaha waxuu soo bandhigaa alaab qiimo jaban, laakiin had iyo jeer ma leh tayada saxda ah.